Scout: Ọrụ maka Izipu kaadi ozi maka $ 1 Onye ọ bụla | Martech Zone
Scout bụ ọrụ dị mfe nke na-eme otu ihe - ọ na - enye gị ohere izipu 4 × 6, kaadi agba akwụkwọ zuru oke nke ị mebere. Na-eweta foto nke aka gị na nke azụ, nye ndepụta nke adreesị (anyị nwere ike inyere gị aka wuo ya ma ọ bụ ị nwere ike ime ya n'onwe gị), ha ga-ebipụta akwụkwọ ozi mara mma wee ziga ya na nọmba ọ bụla nke ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ahịa gị $ 1.00 ọ bụla.
Otu Scout Si Arụ Ọrụ
Tinye Foto - Jiri ndebiri ha ma ọ bụ bugoo JPG, PNG ma ọ bụ PDF na ikpo okwu ha ga-eme ka ọ dị mma.
Tinye Adreesị - Bulite faịlụ CSV nke aha na adreesị ndị nnata ma ha ga-ebipụta ma zipụ ha n'ebe ọ bụla na USA.
Lezienụ ma Ziga - Tinye na kaadị akwụmụgwọ gị, lee nhụchalụ nke kaadi ifiranṣẹ gị, ha ga-eziga iwu gị na ndị mmekọ ha ibipụta na izipu.
Dika igbe mbata na-ejigide ozi ịntanetị na-arịwanye elu, akwụkwọ ozi ọdịnala na-alaghachi. Ana m enweta n’etiti otu narị abụọ na narị abụọ ozi ịntanetị kwa ụbọchị… mana adịkarịghị m enweta karịa mail ole na ole. Kaadị nzi ozi bara uru ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe onye nnata ga-emepe - naanị tinye ozi gị, imepụta ọmarịcha, yana ịkpọ oku iji rụọ ọrụ na kaadị gị.
Ma n'ezie, echefula itinye adreesị weebụ gị, adreesị ozi-e yana ọbụlagodi njikọ mmekọrịta. Mee ka ọ dịịrị ndị mmadụ mfe ijikọ gị!
Zipu akwukwo ozi mbu gi!
Tags: ozi ederedemailnzipu oziakwukwo oziScoutzipu kaadị post